SIDA LOO KARIYO HADHUUDHKA MICROWAVE: SIDA LOO KARSADO BADEECO CUSUB OO KU YAALA BIYO LA'AAN GURIGA IYO SI DEG DEG AH, IYO SIDOO KALE INTA DAQIIQO AH LA HAYNAYO? - KHUDRADDA
Corn waa badeeco dabiici ah oo la jecel yahay oo si dhaqso ah loo diyaarin karo iyadoo aan la isticmaalin dheriyada, biyaha iyo qalabka kale.
Miro, miro la jarjaray ayaa la helaa kaddib marka la kariyo microwave. Alaabtaasi waa la cuni karaa sida saxan dhinaca ama sida saxan madax banaan. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo kariyo.
Noocyada iyo sifooyinka waxtar leh ee alaabta
Corn waa mid ka mid ah dalagga ugu caansan adduunka, taas oo la koray si loo soo saaro macaan dhadhan fiican leh, macaan. Waxyaabaha waxaa loo tixgeliyaa inay aad u sarreeyaan kalooriyeyaasha (100 g oo ah hadhuudh la kariyey oo ku saabsan 120 kcal), laakiin isticmaalka dhexdhexaad ah ma keeni doono waxyeello shakhsiga.
Corn waa runtii khasnad nafaqo ah oo nafaqo ah, dad badanna waxay dayaceen sababta oo ah qadarka weyn ee istaarijka. Corn waxaay ku jirtaa fitamiinada ay ka kooban tahay kooxda B, PP, K, C, D, iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo raad raac ah (potassium, magnesium, fosfooraska, copper, iwm.).
Khubarada ayaa ogaaday in isticmaalka joogtada ah ee hadhuudhku si weyn u yareeyo khatarta istaroogga, cudurada xididada iyo sokorowga, sababtoo ah jidhka ku filan ayaa helaya dhammaan walxaha loo baahan yahay si loo kobciyo loona ilaaliyo hababka dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah. Caanaha kalluunka waxaa ku jira miro badan oo carotene ah, taas oo muhiim u ah indhaheenna (sida loo abuuro hadhuudhka dhalinyarada, waxaad ka heli kartaa halkan).
Waa muhiim! Inkasta oo tayada wanaagsani, gallayda ayaa ka hortageysa isticmaalka dadka qaba cudurrada caloosha iyo caloosha.
Marka xigta, tixgelin faahfaahin sida loo kobcin karo badeecada on cobs ee microwave si deg deg ah.
Diyaarinta habka karinta
Haddaba sida loo sameeyo badeecada? First of dhan, waa inaad soo qaado dirsiyada tayo sare leh tayada (waa in aysan aheyn oo kaliya bislaaday, laakiin sidoo kale in kabaha). Waa sahlan tahay in la go'aamiyo isbeddelka hadhuudhka:
Kabaha elektarooniga ah waa inuu ahaadaa midab, midabo madow. Tani waa calaamad hubaal ah in hadhuudh uu soo kiciyey.
Dheriga hadhuudhka waa in la daadshaa oo si adag loo dhigaa, laakiin ma aha mid adag. Ka dhaqaaq caleemaha oo si khafiif ah u cadaadee caarada ciddida hadhuudhka: haddii ay tahay casiir khafiif ah, hadhuudhku wuxuu diyaar u yahay karinta.
Marnaba iibso hadhuudh aad u badan: waa in ay ahaataa mid aad u badan si ay u cuni karto maalmo dhowr ah: haddii ay sii dheeraato, waxay noqon kartaa caloolxumo.
Sidoo kale waa muhiim inaad xasuusato sifooyin dhowr ah oo lagu karsado hadhuudhka microwave:
Imisa daqiiqo oo karis ah? Wakhtiga cunto karinta waa in si adag loo tixgeliyaa: Haddii aad hadhuudhka ku dhexjirto microwave waqti dheer ayaa loo baahan yahay ugu yaraan hal daqiiqo, waxaad heli kartaa wax sida popcorn guulaysan.
Hal mar waxaad cuni kartaa wax ka badan 3 cobs (marka aad cunto karineysid baakada iyo biyaha).
Roodhadhka qabow, ee lagu kariyey microwave, waa in isla markiiba la cunaa. Haddii ay yara yaraato, waxay isla markiiba ku noqon doonaan kuwo adag.
Markaad cunto karineysid biyo la'aan, uma baahnid inaad ka qaadid kabaha: waxay ilaalinaysaa cunnooyinka hadhuudhka ah ee ka soo baxaya qalajinta.
Inta lagu jiro habka karinta waxad u baahan doontaa:
Gawaarida iyo jaridda jarista.
Bacda balaastikada ah ee alaabada.
Saliid, dhir udgoon, subag (ku xiran calaamadda).
Dheeraad ah ee maqaalku waxa aad baran doontaa sida loo karsaaro badeeco cusub oo aan lahayn biyo iyo guriga.
Cuntooyinka ugu fiican guriga
Habka asalka ah ee lagu karinayo hadhuudhka macaan ee microwave, iyada oo aan nadiifin ka soo bacda. Dhuxulku waa in si buuxda loogu daboolaa buunshaha, waxaad u baahan tahay oo kaliya in yar oo jarjaro dushooda, ka saar caleemo jilicsan.
Waa muhiim! U hubso inaad tirtirto tuubooyinka tuwaal qoyan si aad uga saarto wasakhda.
Hal mar, waxay u badan tahay, ma noqon doonto suurtagal in la kariyo wax ka badan 3 cobs. Maskaxda ku hay markaad gashanayso saxan. Ha ilaawin in hadhuudhku u baahan yahay meel bannaan oo bilaash ah oo loogu talagalay daaweyn kulul oo tayo sare leh
Intee in le'eg ayaad cunto karisid? Adkee awoodda foornada mikrowerka ugu badnaan oo wakhti wax lagu kariyo, taas oo u qaadanaysa in ay qaadanayso qiyaastii 2-4 daqiiqo dhegta kasta. Haddii aad karisato dhowr cobs waqti, bartamaha habka wax lagu kariyo waxaad joojin kartaa mikrowaytka si aad u leexiso hadhuudhka dhinaca kale.
Makhaayadda mashiinka laga sameeyo, ha ku degdegin inaad ka nadiifisid kabaha. U oggolow in alaabtu istaagto dhowr daqiiqo: habkani wuxuu awood u yeelanayaa in uu kiciyo.
Kadibna wax yar ku xoqo hal warqad oo kala sooc maydka miraha (haddii hadhuudh aan la diyaarin, waxaad u diri kartaa microwave mar labaad).
Si taxadar leh uga saar kabaha iyo antennae dhagaha.
Geedka hadhka ah ku rid shaashadda, ku faafi subagga qoyan, milix, basbaas (haddii la doonayo).
Fiiri fiidiyow si aad u kariso hadhuudhkan.
Iyada oo ay ku xiran tahay waxyaabo badan oo faa'iido leh ee hadhuudhku ku cusbooneeyay, cusub, la qaboojiyey oo la qalajiyey, oo waad karin kartaa badarkaas digsi, foorno, kariyaal gaabis ah iyo xitaa kuleyliye laba ah.
Karkari biyo la'aan
Si taxaddar leh u nadiifi cobska hadhuudhka ah ee caleemaha iyo antennae. Haddii loo baahdo, waxaad ka bixi kartaa ul ku yaala cob, si markaa si fudud ayaad u heli kartaa badeecadda dhameysatay foornada adiga oo gashan khaanad gaar ah ul.
Ku rid cobsaha weel ku habboon foornada wax lagu dhejiyo, oo masaafada u dhexeysa. Ku dar dhirbaaxada aad jeceshahay (basbaaska madow), toppings (liin / liin). Haddii la rabo, waxaad ku rushaysaa karaa hadhuudhka jilicsan ee jiiska adag.
Ku darso hadhuudhka tuwaal qoyan oo ku soo dir microwave, adoo awood u leh awoodda ugu badan. Muddada diyaargarowga waxay ku xiran tahay tirada koollada la dhigo mikrowave (dhag kasta wuxuu qaadan doonaa qiyaastii 4 daqiiqo, markaa waa in la wanaajiyaa).
Ka saar khudaarta dhameysatay mikrowerka iyo u diyaari in yar.
Ku caday subag yar. Daadi milix iyo basbaas.
Iska ilaali hadhuudhka ka soo baxa haraaga, boogaha. Ku dhaq oo tirtir tuwaal waraaq ah. Iska yaree cobska baararka qiyaastii 4-5 cm qaro weyn.
Ku rid bacda wax lagu dubo (tusaale ahaan, dill qalalan, milix, basbaaska madow), ku dar qaaddo biyo ah (tani waxay u oggolaanaysaa cobs in loo diyaariyo sida ugu suurta galka ah) oo u dir foornada mikrowave 800 W 10 daqiiqo.
Kadib guji ballanqaadka ah, si taxadar leh uga saar bacda leh alaabta la dhammeeyey iyo ha u istaagaan dhowr daqiiqo.
Ka dibna geerida ku rid saxanka. Si dhakhso ah ayaad ugu adeegi kartaa miiska.
Hoos waxaa ku qoran fiidiyo ku saabsan sida loo kariyo hadhuudhka xirmada.
Dheecaanku wuxuu ku daray
Qodobka caadiga ah ee hadhuudhka, la kariyey ee foornada wax lagu dhejiyo leh biyaha dheeraadka ah. Wixii diyaarinta waxay u baahan doontaa oo keliya cobs hadhuudh iyo dhalinyarada.
Marka hore, u diyaari sheyga wax lagu kariyo. Si fiican u nadiifi jeexa caleemaha iyo boogaha, ka dibna ku dhaq oo qalaji tuwaal waraaq ah.
Ka dibna ku rid weel kasta oo qoto dheer oo ku habboon cunto karinta foornada microwave, oo ku dabool biyo.
Ku rid microwave 45 daqiiqo adoo awood u leh qiyaastii 700-800 watts. Wakhti ahaan hubi heerka biyaha. Ku dar haddii loo baahdo.
Dhamaadka geedi socodka wax lagu kariyo, si tartiib ah uga soo saari hadhuudhka biyaha, si khafiif ah ugu rushee milixda, ha qaboobin qaboojiyaha oo ku raaxee jilicsan, casaan casiir leh.
Sidee u cunaan oo u adeegaan?
Corn wuxuu ku karsanay mikrowave, Waxaad cuni kartaa labadiinaba gacmahaaga iyo gacan qabashada khabiirada gaarka ah. Waxaad ka saari kartaa hadhuudhka ka kobcinta loona daro nadiif nadiif ah sida saxan dhinaca ah oo saxan ah (khudradda la kariyey waa mid u fiican hilibka, digaaga, bariiska, iwm).
Markaad isticmaasho cobs-baradho la kariyey sida saxar gooni ah, waxaad ku dari kartaa wax yar oo ah dhadhanka caadiga ah. Cuntada saar dharka quruxda badan. Qaado subag subag iyo joodaree on cob. Ka dibna ku rush oo milix yar iyo basbaaska madow.
Jacaylka Cheese wuxuu ku rusheeyaa jinsi kasta oo adag oo ku yaal rugta (ganaax, tusaale ahaan, cheddar).
Talo! Dumarka "duet" ayaa laga sameyn doonaa maraqa hadhuudhka ah iyo labeen dhanaan (labeen dhanaan ah waa in lagu qaso qanjaruufo cusbo ah iyo basbaaska cas cas).
Talooyin & Digniino
Sidaa daraadeed habka loo kariyo hadhuudhka microwave, iyo sidoo kale habka loo cuno, waxay keenaysaa farxad kaliya, waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto qaar ka mid ah shaashadaha yar yar ee muuqda:
Marka la nadiifiyo cobsiyada hadhuudhka, gacmo gashi waa in loo isticmaalaa (galoofyada jikada, galoofyada biyaha lagu dhaqo, iwm) si looga ilaaliyo gubashada kuleylka, maadaama badeecada ay aad u kulul tahay ka dib marka la sameeyo mashiinka microwave.
Si aad uhesho kabadhka hadhuudhka, waa in aad marka hore diyaariso hadhuudhka, ka dibna jeex jeexan yar oo ku wareegsan saldhigga koollada. Saar qaboojiyaha ugu sareeya oo ka saar, sidaas, isla markiiba, iyada iyo iyada, iyo caleemo.
Haddii aadan cunin hadhuudhkii oo dhan isla markiiba, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho si aad u ilaaliso dhadhanka: Ku duub tuubooyinka shukumaan nadiif ah oo ku jira bakeeriga (wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan habka ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo hadhuudh la kariyey, halkan ka akhriso).
Kudun hadhuudhka microwave waa inuu ahaado mid si gaar ah loogu talagalay cob.
Waa hagaag, iyo ugu dambeyntii, dhawr taxaddar oo ku saabsan karinta hadhuudhka ee microwave. Marka hore, marka aad ka heleysid cobsashooyinka microwave, xasuusnoow inay aad u kulul yihiin, markaa ha isku dayin inaad dhakhso u qafisid tidbitka. Marka labaad, markaad isticmaasho yaryar oo aad u yar oo loo goynayo hadhuudh, waa in la geliyo kobcinta, waa inaysan ku ridin microwave iyo sheyga, haddii kale, waxaad ku gubi kartaa farahaaga adigoo qaadanaya hadhuudh dhamaystiran.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo kariyo hadhuudhka si dhakhso ah iyo dhadhan fiican leh ee mikrowave. Sure ilaa isku day mid kasta oo ka mid ah cuntada la soo bandhigay oo aad dooratid ugu fiican ee bangiga doofaarka culus. Cunto qabow!